LaLiga Fantasy Marca, manadihady ny lalao ho an'ireo tia baolina kitra izahay | Androidsis
LaLiga Fantasy Marca, manadihady ny lalao ho an'ireo tia baolina kitra izahay
Alfonso de Frutos | | About us, hevitra
Fantaro daholo ny garter mahafinaritra. Tany Etazonia dia efa namorona ekipa basikety sy baolina kitra manokana ry zareo nandritra ny taona maro, ary anjaran'i Espana izao. Niara-niasa tamin'i Comunio nandritra ny taona maro izahay, saingy mpifaninana henjana no nipoitra: LaLiga Fantasy Brand.
Tena nahatratra ny tsena ity fampiharana ity tamin'ny taon-dasa, saingy fampiharana tena miadana sy mavesatra izy io izay nandany ny angon-drakitra ho an'ny mpampiasa sy namoaka ny ratsy indrindra isaky ny misy hadisoana tsy tapaka. Soa ihany, ny fifanekena tamin'i Marca dia tena tsara ho azy ireo. Ka anio no itondrako anao a Fanadihadiana horonantsary LaLiga Fantasy Marca mba hahafantaranao kely kokoa ity lalao mahaliana ity.
1 Inona no atao hoe ligy mahafinaritra?
2 Fandinihana ny fampiharana LaLiga Fantasy Marca
4 Sintomy ny LaLiga Fantasy Brand
Inona no atao hoe ligy mahafinaritra?
Alohan'ny hanombohako hamakafaka ny fampiharana dia hazavaiko inona no ligy mahafinaritra?. Ireo karazana lalao ireo dia miorina amin'ny ligy lehibe amin'ny fanatanjahantena lehibe. Amin'izany fomba izany dia misy ny ligy mahafinaritra an'ny NBA, NFL na efa any Espana miaraka amin'ireo ekipa fizarana voalohany.
Tsotra tokoa ny mekanisma misy azy: Mila mamorona kaonty fotsiny ianao ary ny lalao dia hanome anao mpilalao andalana tsy miankina izay handrafitra ny ekipanao manomboka.. Avy eo azonao atao ny manapa-kevitra hoe iza no mpilalao tianao amidy, ankoatry ny afaka manitatra ny ekipanao amin'ny alàlan'ny sonia eo amin'ny tsena.
Fandinihana ny fampiharana LaLiga Fantasy Marca
Ankehitriny, rehefa fantatrao hoe inona ireo lalao ireo, azoko atao ny manohy mandinika ilay rindranasa. Araka ny efa nolazaiko tetsy ambony, LaLiga Fantasy dia nanatevin-daharana ny gazety fanatanjahan-tena fanta-daza Marca amin'ity vanim-potoana vaovao ity.
Avy eto aho dia afaka nanatsoaka fehin-kevitra roa, ny iray tena tsara ary ny iray tsy dia be loatra. Ny ampahany tsara dia miaraka amin'ny fisian'ny fampiharana efa niatrika fanodikodinam-batana miavaka ary tena tsara raha oharina amin'ny kinova taloha, ankoatry ny fanatsarana ny fotoana fandefasana.
Araka ny hitanao tamin'ny famakafakana video an'i LaLiga Fantasy Marca, ny fampiharana izao dia miasa betsaka kokoa, afa-tsy rehefa misy lalao izay tsy hitako izay mitohy mahavoky, avelako ireo fotoana famoizam-po ireo rehefa nianjera nandritra ny 1 herinandro ny fampiharana, ary tsy mihoapampana aho.
Ny ampahany ratsy amin'ity fifanarahana amin'i Marca ity diae izao ny mpanao gazety ao amin'ny gazety fanta-daza dia mandray anjara amin'ny isa ataon'ny mpilalao. Tsy manana na inona na inona mifanohitra amin'ny gazety ara-panatanjahantena aho, saingy fantatsika rehetra fa somary tsy misy dikany ny tanjon'ity karazan-gazety ity eto amintsika, ka ny fahitan'ny mpanoratra an'i Marca ny isa azon'ny mpilalao anay dia tsy manome fahasoavana be loatra ahy.
Soa ihany fa tsy izy ireo no mamaritra ny isa farany, noho izany Heveriko ho ratsy kely kokoa izay mendrika ny manisy fiheverana ny fanatsarana miavaka amin'ny fihenan'ny fampiharana. Milaza aho fa tsy misy fiatraikany firy intsony izany hatrizay, tsy toy ny Comunio izay mifototra amin'ny fanombanana ny mpanao gazety avy amin'ny gazety AS, amin'ny raharaha LaLiga Fantasy Marca izay mavesatra be ny ataon'ilay mpilalao eny an-kianja.
Ary io dia misy andiana masontsivana raikitra izay mamaritra ny teboka izay raisin'ny mpilalao mifototra amin'ny hetsika izay ataony; amin'izao fomba izao Raha ohatra ny mpilalao iray eo amin'ny kianja filalaovana maherin'ny 60 minitra dia efa mahavita isa iray ry zareo. Na raha ny mpiandry tsatokazo iray amin'ny penalty dia hahazo isa 5. Ny mekanisma iray hisorohana ny ahiahy sy ny fanombanana tsy misy fotony satria ny mpanao gazety Marca dia afaka manome isa efatra farafahakeliny ho an'ireo mpilalao, araka ny nolazaiko, ny fitaomana dia tsy lehibe noho ny mpifaninana lehibe indrindra ao aminy.
Mora tokoa ny fampiasana LaLiga Fantasy Marca: mila mamorona mombamomba ny mpilalao fotsiny ianao ary mamorona ligy amin'ny namanao, na manatevin-daharana iray efa noforonina. Raha vantany vao tafiditra ao amin'ny ligy ianao, dia homena andiana mpilalao maromaro, ankoatry ny tetibola 100 tapitrisa euro hanombohana hanao sonia.
El ny tsena dia havaozina isaky ny 24 ora miaraka amina mpilalao vaovao valo noho izany dia tsy maintsy jerenao ilay rindranasa isan'andro hitady an'io foibe ilainao io. Azonao atao ihany koa ny mametraka ny mpilalaoo amidy, manamarika ny vidiny izay heverinao fa mety, ary na dia mivarotra eo noho eo aza ny antsasaky ny tena vidiny, hetsika maharary nefa mety hialanao amin'ny olana mihoatra ny iray.
Ary izany dia ao amin'ny LaLiga Fantasy Marca raha tonga amin'ny andro iray miaraka amin'ny mizana mandaitra ianao, afaka mindrana hatramin'ny 10% amin'ny teti-bolanao ianao, tsy hahazo isa ianao. Amin'ireto tranga ireto dia tsara kokoa ny mivarotra amin'ny mpilalao toy izay ny lany hevitra, lazaiko aminao avy amin'ny zavatra niainanao.
Asongadino izany tsy misy fetran'ny ligy isaky ny profil mba hahafahanao milalao amin'izay tadiavinao amin'ilay mpampiasa iray ihany, safidy tena ahazoana aina ahafahanao mivezivezy mora foana sy haingana amin'ireo ligy samihafa andraisanao anjara.
Ny iray amin'ireo manintona an'i LaLiga Fantasy Marca dia izany fanavaozana amin'ny fotoana tena izy, noho izany ny fihetsiky ny mpilalao ao amin'ny ekipanao dia ho hita taratra amin'izao fotoana izao. Na dia mbola afaka miditra amin'ny fampiharana aza ianao dia mamaly izany.
Ary io dia tamin'ny taon-dasa no feno ny fampiharana nandritra ny lalao noho ny fahamaroan'ny mpampiasa mampiasa azy. Tamin'ity taona ity dia iray andro monja isika ary tsy afaka ny hiditra ao amin'ilay rindranasa, na ny hiasan'ny marina, mandritra ny lalao. Fehiny: hadino ny mijery ny isa amin'ny fotoana tena izy, miandry ny fiafaran'ny lalao ianao ary amin'ny alina dia mijery azy milamina. Milaza aminao izany avy amin'ny zavatra niainako.
ihany LaLiga Fantasy Marca dia fampiharana feno tokoa izay mihoatra noho izay antenaina. Lalao tsotra izay tsy mila fifantohana firy, izay ahafahanao mampifandray 10 minitra isan'andro dia mihoatra ny ampy, noho izany dia ho tonga mpiara-miasa akaiky indrindra aminao amin'ireny fotoana tsy miasa ireny ianao.
Efa nanandrana ny fangatahana ve ianao? Ahoana ny hevitrao momba an'i LaLiga Fantasy Marca?
LaLiga Fantasy Brand
Tena tsotra sy intuitive izy io
Tena tsara ny rafitrao isa
Maimaimpoana tanteraka izany
Misavoritaka indraindray ilay fampiharana, indrindra mandritra ny lalao baolina kitra
Sintomy ny LaLiga Fantasy Brand
LaLiga Fantasy MARKA 21-22
Developer: Ny ligin'ny baolina kitra matihanina nasionaly
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » LaLiga Fantasy Marca, manadihady ny lalao ho an'ireo tia baolina kitra izahay
Magic Mansion dia platformer retro monochrome vaovao avy any Nitrome
Archos dia manambara ireo findainy mora vidy, Helium 50f sy 55 Helium, mialoha ny IFA